स्मार्टफोन मोबाइलको भविष्य, अझ स्मार्ट बनाउने होडबाजी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
४ आश्विन २०७७, आईतवार ०२:०४ English
रब लिभर, वासिङ्टन, २८ कात्तिक (एएफपी)। एक दशकसम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी बिक्रीको रेकर्ड बनाएको स्मार्टफोनको ठाउँमा अब नयाँ कुन उपभोग्य वस्तु आउला ? यसकाे उत्तर सजिलाे छैन, तर प्रविधि क्षेत्रमा यसबारे चर्चा शुरू भएकाे छ ।
२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार २३:१८ मा प्रकाशित
सामूहिक बलात्कारको आरोपमा तीन पक्राउ	१७ श्रावण २०७७, शनिबार २०:२६